Valverde Oo Faah-faahiyay Sababta Aysan U Dooneyn Barca In CL Ay Ku Wajahdo Real ama Sevilla %
Tababaraha kooxda kubada cagta Barcelona, ninka lagu magacaabo Ernesto Valverde, ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in kooxdiisa aysan marnaba dooneyn inay ku beeganto wareega Sideed dhamaadka Champions League, kooxaha reer Spain.
Naadiyadda kala ah Real Madrid iyo Sevilla, ayaa waxay yihiin kuwa kaliya ee wareegaan jooga, waxaana Valverde, uu sababta ku sheegay in labadaan kooxood ay yihiin kuwa ay wax badan isa soo arkeen, islamarkaana ay doonayaa waji cusub.
Isagoo warbaahinta la hadlayey ka hor ciyaarta Athletic Bilbao, oo uu horey usoo leeliyey Valverde, ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in kooxda lagu aadiyey hada ee AS Roma, ay tahay mid aad u adag, islamarkaana uu rajaynayo wax wanaagsan.
“Marka halkaan la joogo waa ay adag tahay in la fallanqeeyo go’aamadaan oo kale, laakiin waxaan ku qeexayaa in aanan dooneyn la dheelista Real Madrid ama Sevilla, maxaa yeelay wax badan ayaa isa soo araganay,” ayuu yiri Valverde.
“Waxaan dooneynay inaan la dheelno kooxaha ka dheela horyaalada kale, dadkuna waxay yihiin kuwa la barbar dhigay halistooda iyo kooxaha awooda badan, laakiin waxaad xasuusataa sida ay heerka Group-yada ugus oo dhameysteen Atletico iyo Chelsea.
“Waxaad hada ognahay sida ay xoogan yihiin kuwa aan hada la dheeleno, marka waxay noqon doontaa mid aad u adag,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, hogaamiyaha kooxda kubada cagta Barcelona, ninka lagu magacaabo Ernesto Valverde.
Barcelona vs AS RomaChampions LeagueCLRealSevillaValverde